किन महत्वपूर्ण छन् माघे संक्रान्तिमा खाइने आहारहरु ? – सत्य तथ्य र निष्पक्ष्य समाचारको लागि
नेपाली समुदायले माघे संक्रान्ति पर्व विशेष रुपमा मनाउँछन् ।माटो मुनी फलेको बालीको रुपमा तरुल, सखरखण्ड, पिँडालुका साथै चाकु, तिलको लड्डु, खिचडी पनि खाने प्रचलन छ। जाडो मौसममा शरीरलाई धेरै पौष्टिक आहार चाहिने भएकाले माघे संक्रान्तिमा खाइने यी आहारहरुले शरीरलाई आवश्यक शक्ति दिई रोगसँग लड्ने क्षमता समेत बढाउँदछ।
जाडोको समयमा पाचन प्रणाली समेत मजबुद पारी राख्न र शरीरमा उर्जा र शक्ति कायम राख्न चाकु उपोयगी रहन्छ। चाकुमा आइरन हुने हुनाले रक्तअल्पताका बिरामीलाई समेत अत्यन्त फलदायी रहन्छ।
जाडोको मौसममा मासको दाल, घिउ र चामल मिसाई खिचडी खानाले शरीरमा गर्मीको मात्रा बढाई तागत दिने काम गर्दछ ।
यसरी माघे संक्रान्ति पर्वमा खाइने आहार, स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।
फोटो : हेलोट्राभलडटकम Source
Tags: किन महत्वपूर्ण छन् माघे संक्रान्तिमा खाइने आहारहरु ?
Previous आयुर्वेद अनुसार स्वस्थ्य जीवनशैलीको अभ्यास
Next प्रकृतिसँग हातेमालोः जीवन सुखी र निरोगी